मार्च 31, 2019 मार्च 31, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments उपवास, ब्रत
अन्न केही पनि नखाई बसेको स्थितिलाई उपवास बसेको भनिन्छ जसलाई ब्रत बसेको पनि भनिन्छ। सनातन हिन्दुधर्म परम्परामा व्रत उपवासको महत्व रहिआएको छ । उपवास बस्नुको धार्मिक महत्वको साथ-साथै स्वास्थ्यको दृष्टिकोण पनि ठुलो महत्व रहेको छ । उपवास भनेको आहारलाई सम्पूर्ण रूपले त्याग्नु हो । दूध, अन्न, फल आदि ठोस र तरल पदार्थ सेवन नगर्नु हो । एउटा निश्चित अवधिका लागि सबै आहार त्याग गरी शरीरका विविध अंगप्रत्यंग एवं उनीहरूको प्रक्रियालाई आराम दिई शुद्धि गर्नु नै उपवास हो।
शरीरलाई नियमित र निश्चित आहारको जति आवश्यकता हुन्छ त्यति नै उपवास पनि लाभदायक छ । खानाले शरीरलाई इन्धन एवं शक्ति प्रदान गर्छ भने उपवासले शुद्धि र आरोग्यता । यसबाहेक पाचनप्रक्रिया, रक्तसञ्चार, आराम र चैतन्य प्रदान गर्ने काम उपवासले गर्छ । उपवासलाई प्राकृतिक उपचार भन्ने गरिन्छ। प्राय: रोग हानिकारक एवं अतिशय खानपानका कारण उत्पन्न हुन्छ । हामी जति खान्छौं त्यसको २५ प्रतिशतले जीवन निर्वाह हुन्छ। स्वस्थ्य व्यक्तिले पनि ६ महिनामा एकपटक उपवास बस्दा स्वस्थ एवं दीर्घायु रहन सकिन्छ । उपवास एवं ब्रत बस्नुअघि ध्यान दिनैपर्ने कुराहरु यस प्रकार छन् ।
उपवास बस्नुका फाइदाहरु
ध्यान दिनैपर्ने कुराहरु
३. उपवास एवं ब्रत बस्नु दुई, तीन दिन पहिलेदेखि अली बढी अन्न सेवन गर्ने । उपवास एवं ब्रत बस्नु एक, दुई दिन अगाडी एक समय रोटीका, सलाद तथा तरकारी तथा फलफुलको सेवन गरौ ।
४. उपवास एवं ब्रत बसेको बेला एक गिलास दुध, कागति पानी, जुस र फलफूल सेवन गर्न सकिन्छ । यसले शरीरमा आवश्यक पोषक तत्वको कमी हुन दिदैन ।
५. धेरै दिनसम्म उपवास एवं ब्रत बस्ने हो भने ३-४ दिन सम्म भोक लागेको महसुस हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा कागती पानी, मह वा २-३ गिलास केवल पानी पिउनाले मात्र पनि पेटको भोक हट्ने गर्छ ।
९. उपवास एवं ब्रत बस्दा मुख सुक्ने तथा दिशा नुहने समस्या आउन सक्छ । यसबाट बच्नको लागि अमला, नासपाती , त्रिफला, पालुड्डोको सुप तथा करेलाको रसको सेवन पेट सफा गर्न उचित मानिन्छ । त्यस्तै उपवास एवं ब्रत बस्दा पिसाब पोल्न, पेट दुख्ने, छाती पोल्ने, कव्जियत, संक्रमण तथा गन्हाउने पसिना लगायतको समस्या पैदा हुने गर्छ । यस्तो अवस्थामा एकै पटक पानी पिउनुको सट्टा एक-एक घण्टाका फरकमा कागती पानीको सेवन स्वास्थ्यका लागि लाभदायक मानिन्छ ।
← फर्सीको बियाँ खानुका फाइदाहरु
के यहि हो परिवर्तन ? →
जनवरी 26, 2019 साइन्स इन्फोटेक 2
वैज्ञानिक कारण : उपवास एवं ब्रत किन बस्ने ?